Iiprorothi zizidalwa ezimangalisayo. Zilula kakhulu ukufunda kwaye zihlala zizisa uvuyo kubaphathi bazo ngokukwazi kwabo ukuthetha kunye nezinye iindlela eziqhelekanga. Kwaye ukuqeqesha isilwanyana sakho ngeendlela ezilula kunokuba ucinge.
Ngokwemvelo, i-parrot ihlakaniphile kwaye ihlakaniphile. Ukuba ukhangeleka kakuhle into eninzi kuyo yonke into ekunikezelayo kwi-parrot yakho kwinqanaba, kuya kuba nako ukuqonda ukuba yiziphi izinto azakukunika zona zilula.
Xa sithenga i-parrot, sifuna ukuba yinto ehloniphekileyo, enobubele kunye nengqiqo. Nangona kunjalo, abaninzi bethu bayalibala ngokupheleleyo ukuba le nto ayinayo ikati okanye inja, kodwa iyinyoni yendalo yangasese. Ngoko ke, ukuze udibanise intaka, kubalulekile ukuba wenze umgudu othile.
Emva kokuba uthenge intaka, mayeke ukuhlala, ungakhathazeki ngabo ubuncinane ngosuku olulodwa, vumela ukuba lufike kwimpembelelo kwaye lubuyele ekuxinzeleleni. Xa uthengi, qiniseka ukubuza ukuba intaka yakho yondliwe. Ngokukhawuleza, xa uletha ikhaya leentaka, unike ukutya okutsha, kuya kunika ithuba lokumvuselela.
Ngoku ke makhe sithethe malunga nendlela yokuqhubeka udibanisa i-parrot:
Okokuqala, kufuneka uchithe ixesha elithile ebomini yakho. Ngaloo ndlela, isilwanyana esincinci siya kukwazi ukubona ukuba awuyibi kakhulu.
Ngoku unako ukubeka kancane isandla sakho kwi-vkletku kwaye ubambelele khona khona. Kakade emva kwexesha i-parrot iya kukwazi ukusetyenziswa kule nto.
Xa intaka yakho ilambile, faka ukutya okumnandi, umzekelo, i-millet ezindlebeni. Ukuba ufuna ukuba konke kwenzeke, qaphela ukuba ubuncwane bokuba ngumhlobo wakho. Nsuku zonke, phinda konke oku, emva kweentsuku ezimbalwa intaka iya kusetshenziselwa izandla kunye kwaye ayiyi kubayika.
Qala ukudlala kunye nesilwanyana, zama ukumbamba "puziko".
Ngoku yisikhathi sokufundisa "umntwana" ukuba ahlale emnwe wakho. Ukwenza oku, kucetyiswa ukuba uzame ukuhambisa umunwe phantsi kwebele ye-parrot (ngaphezulu kweepaws). Mhlawumbi uvavanyo lokuqala aluyi kusebenza, kodwa ekugqibeleni uya kuhlala emunwe wakhe.
Ngokuqinisekileyo, le nkqubo ilungile, kodwa inokuphela kwexesha elide!
Kukho enye indlela yokwenza umhlobo omncinci - ubeke nje iintende ezivulekileyo kwi-cage uze uwagcine apho. Kakade, i-parrot iya kuqala ukubetha ngamandla ngamaphiko, kodwa ixesha elide alikwazi ukuyenza kwaye, ekugqibeleni, liya kuhlala ezandleni zayo. Emva kwemizuzwana embalwa, unokuqala ukuhamba kwakhona, kodwa empeleni awukwazi ukususa kwinqanawa, ngoko i-onnosova ihleli ezandleni zakho. Ngoko i-parrot ingakwazi ukukhawuleza ibe yinto eqhelekileyo.
Nika ingqalelo kwingxoxo yakho, cingca ukuba i-parrot ngumntwana wakho, khuluma naye ngobumnene nangokuzinza. Musa ukwenza nantoni na ukunyakaza, ngokukodwa entloko. Uya kuqonda ukuba isilwanyana sithemba wena, xa uya kuzincama kwihlombe lakho nasezandleni zakho. Ngokuqhelekileyo, ungalibali "umntwana" wakho ukukhaba, kodwa khumbula ukuba kufuneka kube lula. Ngoko isilwanyana sisinya kwi-neyprivyknet kwaye siya kuphendula. Ukuba uthenge i-parrot encinci - umfana, unako onke amathuba okumfundisa ukuba aphinda izandi. Naluphi na uprotho unakho ukuthetha, ngoko unokufunda lula. Nangona kunjalo, kufuneka ube nesineke. Nangona kunjalo-ngexesha loqeqesho kulungile ukusebenzisa ukuqiniswa okulungileyo. Oku kuthetha ukuba emva kwesifundo ngasinye, apho intlanzi iya kuzibonakalisa kakuhle, ufanele uyivulele ngolunye uhlobo lokutya.
Abanini baninzi banenkxalabo yokuba into yokuba kusasa iiproti zikhala. Kufuneka kuqondwe ukuba oku kusemthethweni ekuseni nakusihlwa. Ukuze ugweme oku, gubungela isigodlo ngesigqubuthelo kusihlwa, kodwa ukuze inxalenye engaphambili ivule. Ukuba intaka iqala ukumemeza imini, ke yinike ingqwalasela encinci, yinike indawo engakumbi kunye nesinye isiqhelo esimnandi sokutya okanye vumela ukuba iqhube ikhululekile. Njalo khumbula ukuba kwintlango zasendle, iiproti zihlala zixakekile, kodwa ekhaya kwikhala elivaliweyo, unesizungu kwaye unesizi. Ukubonelela ngeetyshi ezintsha kunye nokutya okumnandi.
Musa ukunqumla amaphiko wamaphiko ukuze bangakwazi ukundiza. Oku kufanele kwenziwe kuphela kwiimeko ezizodwa: ukuba unamacwecwe avuthayo ekhaya, ukuba intaka leyo ibetha abantwana abancinci, kufuphi namagumbi okuvula amanzi, njl.
Kukho amaxesha abanikazi abanomdla ukuba ngaba kunokwenzeka ukuphazamisa i-parrot? Abaqeqeshi abazicebisi. Awukwazi ukuwuthintela intaka. Iiprorots ayinakunceda, nayo inememori enkulu kakhulu. Iiprorots zidinga ukunakwa kunye nomsa. Kuphela ama-eagles-ahlamba ahlala kwi voddeodinochkami, kodwa ama-parrots awayekho. Ngoko ke, ukuba unethuba, ukuba intaka yakho iphilile ngokwengqondo, mfumana umlingane womphefumlo. Ukuba kungenjalo, zinike i-pet ithalelo ngakumbi.
Ngoku ukuba i-parrot yakho ibe yinto eqhelekileyo, unokumfundisa amancinci.
Indlela yokufundisa intaka ukuba idlule kwimibhobho?
Enyanisweni, oku akuwona msebenzi onzima kwaye ukuba unokuqeqeshwa okwaneleyo, unokufumana impumelelo ethile. Kakade, ityhubhu kufuneka ibe mkhulu kangangokuthi isilwanyana sakho singadlula kuyo. Okokuqala, kufuneka aqhelane naye aze afundeke. Ekuqaleni, zama oku ngephepha elifutshane. Okokuqala unokuyiqondisa le ntaka ngendlela efanelekileyo, kwaye xa uphuma, gcina intonga okanye ihlaziye. Xa i-parrot isebenza kunye nomsebenzi, mdumise uze umnike unyango. Ekuqaleni, unokumkhuthaza kuphela ukuba achukumise ityhubhu, kwaye ekupheleni komsebenzi. Ngoko wakho umhlobo omncinane uya kufunda ukuhamba nge-tube.
Indlela yokufundisa i-parrot ukuba iphendukele ekhoneni?
Njengokuba uqala ukukhohlisa, kufuneka usebenzise intshukumo ye-birdytyanulas kwintonga yokuqeqesha, kwaye uya kwandisa kancane i-angle. Ndihlala ndidumisa isilwanyana.
Uzifundisa njani wena ukulinganisela kwibhola?
Ukuba unesonto eliqhelekileyo le-parvy, ngoko ulungele ibhola yetennis. Thatha i-tipper ezandleni zakho uze uyibeke ngobumnene kwibhola. Ukuba isilwanyana asiyithandi ibhola, xhaxela ukuphatha phezu kwentloko yenqatyana ukuze ikhuphuke i-samarik kwaye itye ukutya. Kwiintsuku ezimbalwa inyoni iya kukwazi ukubonisa eli qhinga ngokugqibeleleyo.
Indlela yokufundisa i-popuglyapasat kumculo?
Ukwenza oku, vula umculo, ubeke isandla sesilwanyana, uze usigubungele phantsi kumculo. Kwakhona, ungaqala ukudibanisa intloko yakho ngexesha kunye nomculo ukuze i-parrot ibe nomzekelo omhle. Xa intaka iya kuguqula ikhanda layo, uya kuqonda ukuba baye bazuza umphumo omuhle, kwaye abazange bazame ngeze. Khumbula ukuphathwa kakuhle.
Qaphela ukuba uqeqesho lufanele lwenziwe yonke imihla ngemizuzu elishumi ukuya kwishumi elinesihlanu, kodwa engaphezulu. Amaqela aphinda ahlazile kwaye aphephe, nakanjani na ukukhala. Ngaphezu koko, onke amaqela kufuneka ahambisane nempawu, ngoko-ke i-parrot iya kuqonda yonke into oyifunayo kuyo ngokukhawuleza kwaye kulula.
Pyroplasmosis kwizinja: unyango
Izinja zeWelgi Corgi Pembroke
Indlela yokucoca inja etafileni
Ukusetyenziswa kweejaji kwiiyeza zendabuko
Iimpawu ze-zodiac uphawu lwe-Aries
Izikhonkwane zensimbi: eyona nto ibalulekileyo ebusika 2016-2017
Konke eCrimea: ukucwangcisa iholide yentsapho kunye nabantwana baka-2015
Izizathu ezi-7 ezithintela umfazi ukuba enze umsebenzi
IManna casserole nge-apricot
Kulula kangakanani ukuqala ukutshata nabantu?